Wararkii ugu dambeeyay ee dalka Ethiopia kadib qabsashadii Mekelle | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Wararkii ugu dambeeyay ee dalka Ethiopia kadib qabsashadii Mekelle
Wararkii ugu dambeeyay ee dalka Ethiopia kadib qabsashadii Mekelle
Waxaa soo baxaya warar kala duwan oo ku saabsan xaalada guud ee deegaanada ismaamulka Tigray kadib markii ay ciidamada milatariga dowlada Ethiopia ay la wareegeen magaalada Mekelle ee xarunta ismaamulka Tigray.
Hoggaamiyaha TPLF Debretsion Gebremichael ayaa sheegay in ciidamadiisa ay dagaal kula jiraan militeriga Itoobiya meel u dhaw caasimadda Mekelle oo labo maalin ka hor ay la wareegeen ciidamada dowladda.
Maamulka TPLF ayaa sheegay inay dib u qabsadeen magaalada labaad ee ugu weyn gobolka ee Axum isla markaana ay soo rideen diyaarad dagaal oo ay leeyihiin ciidamada Itoobiya.
Sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Itoobiya oo la yiraahdo Zadig Abraha ayaa been ku tilmaamay sheegashada TPLF ee ah inay dib ula wareegeen Axum.
“Diyaarad dagaal nooca MIG oo ay soo direen ciidamada diktaatooriga ah ee Abiy iyo Isaias, madaxweynaha Eritrea si ay u xasuuqdo shacabka Tigray ayaa waxaa soo riday ciidamada difaaca Tigray meel u dhaw deegaanka Abiy Adi oodhaca bartamaha gobolka, duuliyiihii diyaaraddana waa la qabtay” ayuu ku warramay teleefishinka maamulka Tigray.
Dhinaca kale, Abiy oo TPLF ku eedeeyay inay ka dambeeyeen qalaalasihii Itoobiya ee qowmiyadaha
Ra’iisul Wasaaraha oo maanta ka hadlayay baarlamaanka ayaa ku eedeeyay TPLF inay ka dambeeyeen 113 dhacdooyin oo ku saabsan dagaallo u dhexeeyay qowmiyadaha qaar iyo dagaal diimeed ka dhacay dalka Itoobiya tan iyo markii uu xilka qabtay sanadkii 2018-kii si loo wiiqo dowladdiisa.
Abiy wuxuu sheegay in boqolkiiba 99 weeraradii duqeymaha ahaa ee la fuliyay Tigray lala beegsaday halkii loogu talagalay isla markaana aysan ka dhalan wax khasaare ah.
Dowladda Itooobiya ayaa sheegtay inay ugaarsaneyso oo ay ku raadjoogto hogaamiyayaashii gobolka Tigrey, ka dib markii ay dowladda federaalka sheegtay inay la wareegtay magaalada madaxda Tigrey ee Mekelle uuna joogsaday howlgalkii laga waday gobolka Tigray.
Wararkii ugu dambeeyay ee dalka Ethiopia kadib qabsashadii Mekelle was last modified: December 1st, 2020 by Admin
Kenya oo sheegtay in aanay warqad rasmi ah ka helin dowladda Soomaaliya (War Saxaafadeed)
Dagaal Ka Dhacay Duleedka Kismaayo.
Qaramada Midoobay oo ku baaqday in la qaado tallaabo dheeri ah si loo ciribtiro rabshadaha galmada ee la xiriira colaadda ee ka dhaca Soomaaliya